Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado (CIRC) wuxuu cambaareynayaa isku-daygii afgembiga 1/6/21, wuxuu ku baaqayaa isla xisaabtan iyo caddaalad. - Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > Press Release > Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado (CIRC) wuxuu cambaareynayaa isku daygii afgambi ee 1/6/21, wuxuu ku baaqayaa isla xisaabtan iyo caddaalad.
Kaddib isku daygii afgambi ee usbuucii la soo dhaafay ay ka dambeeyeen kooxaha xagjirka ah ee caddaanka ah, Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado (CIRC) iyo CIRC Action Fund waxay ku baaqayaan in laga qaado xafiiska kuwa ku lugta leh, iyo tallaabo deg deg ah oo ay qaadaan saraakiisha la doortay si loo sharfo doorashada malaayiinta qof guud ahaan wadankan oo u codeeyay in la diido wajiga iyo naceybka.
Ha khaldamin, tani waxay ahayd weerar lagu soo qaaday dalkeenna, dadkeenna, oo ay keeneen madaxweyne iyo hoggaamiyeyaasha Jamhuuriyadda oo dafiray aragtiyo shirqool aan sal iyo raad lahayn oo ku saabsan hufnaanta nidaamkeenna dimuqraadiyadda. Qaab-dhismeedka cad ee sarraynta caddaanku wuxuu ka dhigayaa laba-laab karaahiyo.
Eex argagax leh oo ku saleysan midab kala sooc ayaa ka dhex muuqday dadka gudaha ah dhexdooda - rabshadaha rabshadaha wata ayaa lulay calanka isbahaysiga1], Calaamadaha gacanta gacanta cad2], oo jeexjeexay wixii umuuqday warqad duuduub ah oo xarfaha Shiinaha lagu qorayo, kuna adkaynaysa, "dooni mayno dibin daabyada Shiinaha"3] –– iyo jawaabta booliska iyo ilaaliyaha qaranka. Markii hooyadiis madow Miriam Carey ay gaadhigeeda ku garaacday dhufeys u dhow guriga cad, booliska Capitol ayaa toogtay oo dilay intii ay kaxeyneysay; Arbacadii, xubno isla booliis ah ayaa sawirro iska qaadis ah la galay kacdoon wadayaal rabshado wata. Markay dadka madow iyo kuwa bunni ka mudaaharaadaan caddaaladda, Ciidanka Qaranka ayaa heegan ugu jira ciidan boolis ah oo militari wata iyagoo adeegsanaya xeelado dagaal oo ka dhan ah kooxaha nabadda. Laakiin markii xagjiriinta caddaanka ahi u hanjabeen dimuqraadiyaddeenna, rabshado lama ilaalin saacado. Cunsuriyada salka ku haysa dhacdooyinkan uma aysan muuqan hawada khafiifka ah Arbacadii. Waxay ka mid ahayd qaybna ka ahayd nidaamyadii dalkeenna tan iyo aasaaskeedii, waxaana ku faa'iideystay oo ay ku sii shiday hadallada ka imanaya kooxaha xaq-u-dirirka ah sida kuwii ku soo xadgudbay xarunta baarlamaanka.
Si kastaba ha noqotee, inkasta oo ay jiraan dadaallo kuwa doonaya inay kala diraan shaqadeena, waa inaan u dabaaldegnaa guulahayagii adkaa ee aan soo halgannay. Ka dib isku daygii afgembi ka dib, Koongarasku wuxuu shahaado siiyay Joe Biden iyo Kamala Harris inay yihiin madaxweynaheenna iyo ku-xigeenkeenna soo socda, annaga oo ixtiraamaynayna natiijadii doorashada ee aannu dadkeennu ku go'aansannay tirada weyn ee cod-bixiyeyaasha ee ka soo qayb-galay muhaajiriinta iyo bulshada BIPOC. Cod-bixiyeyaashayada kale ee ku nool Georgia ayaa isu yimid, oo ay ku jiraan ka-qaybgalka diiwaangelinta ee Madow, Aasiya Ameerika iyo Jasiiradaha Baasifigga, iyo bulshooyinka Latinx, si ay u doortaan Reverend Raphael Warnock iyo Jon Ossoff Golaha Guurtida - iyagoo tijaabinaya Congress-ka Dimuqraadiga gacanta ku haya.
Dawladeena cusub waa inay si kal iyo laab ah u diidaa qiyamka hantiwadaagnimada cad ee sii huriyay kacdoon wadayaashii Arbacadii ayna isku xilqaamaan ilaalinta xuquuqda dhammaan dadka ku nool dalkan. Taasi waxay ka dhigan tahay joojinta arxan-darrada nidaamkeenna socdaalka ee hadda jira iyadoo la soo bandhigayo sharci lagu siinayo muwaadinnimada dhammaan 12 + milyan oo qof oo aan sharciyeysnayn oo ku nool Mareykanka oo ay ku jiraan ficillo lagu ilaalinayo dhallinteenna soo-galootiga ah iyo kuwa haysta TPS, siideynta qof kasta oo lagu haysto Xiritaanka ICE iyo CBP, iyo xuquuqda kuwa la musaafuriyey inay guryahooda ku yimaadaan. Maamulkani waa inuu sidoo kale difaacaa ICE iyo CBP oo uu hay'adahaas mas'uul ka noqdaa xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee ay geysteen.
Booqashadii Trump ee xadka El Paso waxay ahayd isku day daahfuran oo looga weecinayo rabshadihii weerarkii Arbacadii iyo dhanka cabsida iyo nacaybka ajnabiyeed ee had iyo jeer aasaaska u ahaa ololihiisa. Horey ayaan usoconaa, waa inaan kahortagnaa cadeymaha noocan oo kale ah ee cadaanka ah ee xuduuda iyo waliba caasimada.
CIRC iyo Sanduuqa Waxqabadka ee CIRC waxay taageerayaan dadaallada lagu soo xirayo Donald Trump waxayna ku boorinayaan is casilaad deg deg ah xubna kasta oo ka tirsan koongareeska oo taageeray aragtiyaha shirqoolka QAnon isla markaana dhiirrigeliyey fikradaha xagjirka ah ee caddaanka - oo ay ku jirto haweeneyda Koongareeska ah Lauren Boebert.
Anaga dadka ah waxaan soo dhex marnay wax kasta oo loo qabtay in lagu kala qeybiyo, looga leexdo oo loo maamuuso xuquuqdeena aasaasiga ah. Waxaan si adag u istaagnay dhexda isku dayada aan kala joogsiga lahayn si loo xaqiro oo loo aamusiyo Madow, Soo-Jeedley, soogalooti iyo bulshooyinka kale ee midabka leh. Iyo wadajir, waxaan ka dhigi doonnaa Mareykan meel dadka oo dhan, iyadoon loo eegin xaaladooda socdaal.